Thwebula Total Commander 2.62 – Android – Vessoft
Thwebula Total Commander
Inani Commander – a isofthiwe multifunction ukuphatha amafayela namafolda of the system. Isofthiwe siqukethe amabili evumela ukuba aqhube eziningi izenzo amafayela uhlelo, imemori khadi, izicelo kanye nezinye uphiko izingxenye kudivayisi. Inani Commander isekela yonke imisebenzi ifayela main nedivaysi idatha bese inikeza impande-amalungelo ukuphatha amafayela ukungena kuwo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukhiphe RAR noma ZIP ezinqolobaneni futhi uma kunesidingo cindezela amafayela enkulu e ZIP yohlelo. Inani Commander iqukethe ezandisiwe search engine shoka izihlungi ngempumelelo ukuthola amafayela by nemingcele ehlukahlukene. Futhi isofthiwe kwenza ukuba sandise amathuba ayo ngokuxhuma plugins ezahlukene.
Ukwesekwa Full of the imisebenzi ifayela
Akhiwa-in text umhleli
Connection of the plugins
Amazwana on Total Commander:
Total Commander Ahlobene software: